Kaspersky Antivirus 2012 Pre- Activated Full Version...! | အိမ်လွမ်းသူ...
Kaspersky Antivirus 2012 Pre- Activated Full Version...!
ကျွန်တော်ဒီနေ့ Kaspersky Antivirus 2012 Full Version... လေးရထားလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...!သိပြီးသား သူငယ်ချင်းတွေကလည်း သီးခံပေးပါလို့ပြေားပါရစေ...! Key... လေးတွေလည်း တော်တော်များများထည့်ပေးထားပါတယ်...!သုံးကြည့်လို့ အဆင်မပြေမှု့များရှိခဲ့ရင် Comment... လေးထားခဲ့ပါ...! ကျွန်တော်သည် တက်၍ မဟုတ်ပါ ယခုမှလေ့လာနေစဲ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်...! အကူအညီများလိုရင်တော့ တက်နိုင်သလောက် ကူညီပေးတက်ပါတယ်နော်...ဟဲ...ဟဲ...!အောက်မှာ Media Fire လေးဖြင့်တင်ပေးထားပါတယ်...!
1 Response to Kaspersky Antivirus 2012 Pre- Activated Full Version...!
ညီလေး....Media Fire ကို ကလစ်တာ တခြားဟာတွေတက်လာတယ် ကျန်တာဘာမှတက်မလာဘူး ဘယ်လို Download လုပ်ရမလဲဆိုတာ ပြောပေးပါဦး